WBOn Wallagga keessa socho’u beeyilada nyaatee lafarraa fixaa akka jiru Jeneraal Biraanuu Julaa paarlaamaa Itoophiyaatti himan. | Kichuu
WBOn Wallagga keessa socho’u beeyilada nyaatee lafarraa fixaa akka jiru Jeneraal Biraanuu Julaa paarlaamaa Itoophiyaatti himan.
Posted on January 8, 2019 by kichuu_admin
Dubbii hoodaa…siyaasa jaarraa 21ffaa…
“Waraanni ABO wallagga keessa socho’u gaafa galu, uummanni yaa’ee simate, kabajaan sangaa qalee nyaachise, sangaan dhumnaan hoolaa qalaa jedhee dirqisiifnaan uummanni hoolaa qaleefii nyaachise, hoolaan dhumnaan lukkuu qalaa jedhee dirqisiisee jennaan uummanni lukkuu qalee nyaachise, lukkuun dhumnaan waan qabdan fidaa jedhee dirqisiisuun uummata ajjeesuu fi saamuu jalqabe”
Jeneraal Birhaanuu Julaa, I/A muummee ajajaa waraana waliigalaa Itoophiyaa, paarlaamaa fuulduratti wanti isaan waa’ee WBO dubbatan kun hunda dura uummata Oromoof, itti aansuunis Qeerroo fi Qarreef tuffii qaban kan agarsiisu fi aantummaan Oromoo xiqqoon tokkollee akka isaan keessa hin jirre kan mulisu dha. Utuu galeefii, isaanumayyuu hacuuccaa wayyaanee fi ergamaa Saamooraa Yunus ta’uu jalaa baasee aangoo kanaan kan isaan gahe qabsoo saba kanaati, keessattuu Qeerroo fi Qarree WBO isaan itti ga’isan kana. Yaa Jeneraal, dubbiini siyaasaa akka qaba, akkuma namatti dhufetti hin balfani.
ABOn mootummaa ADWUI waliin hojjachuuf waliigalteen irra geenye qaama mootummaatiin danqameera, rakkoon mudachaa jira, waraanni narratti banameera jedhee himataa jira. Mootummaanis ibsa baasaa tureen ABOn akkaataa waliigalteetiin deemuu hin dandeenye, kanaaf iddoo hedduutti nagaan boora’eera, olaantummaa seeraa kabajichiisuuf tarkaanfiin fudhadha jedhaa ture. Kun rakkoo wal dhabdee siyaasaati male rakkoo garaa miti.
Rakkoon rakkoo garaa utuu hin taane rakkoo siyaasaa akka ta’e uummanni Oromoos ta’e uummanni Itoophiyaa dur baree fixe. Jeneraal Biraanuun Eenyuun gowwomsuuf akkasitti paarlaamaa fuulduratti dubbii yartuu akka dubbatan ifa miti. Uummanni Oromoo shiftaa fi saamtota qallabuun aadaa isaa miti, dirqamee sodaatees horii itti hinqalu. Wallagga keessa kan jirus kanuma. Ani dhugaa Jeneraala kana nan jaalladha, garuu dubbiin isaan har’a dubbatan kun yaraadha. Oromoon immoo Jeneraal Biraanuu akkuma Generaal Taaddasaa Birruu fi Gen. Waaqoo Guutuufaan akka ta’an hawwa.
Maqaa Olaantummaa seeraa kabajichiisuu fi nageenya mirkaneessuutiin Oromoo akka sabaatti salphisuu fi xiqqeessuun, qabsaa’ota saba kanaa tuffachuu fi shiftaa fi saamtotatti fakkeessuun maqaa balleessuun tooftaa wayyaaneen kaleessa ittiin hojjachaa turtee fi ittiin kisaarte dha
BIYYAAF SABAA mitii QILLEENSINUU hin BILISOOMNE, . SILAA DHUGAA ta’ee, OMN akuma midiya EBC hula hunda seenee dhugaa jirtu waraabee UUMMATAAF gahaa ture.
Nageenya Lixa Oromiyaa: ‘Du’a sodaannee qe’ee keenya dhiisnee baqanne’
Muktaar Jamaal: Gaazexeessaan VOA Adaamaatti dargaggootaan rukutame, saamame